Maalinta haweenka ee 8-da maarso - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maalinta haweenka ee 8-da maarso
Haweenka soomaalida Göteborg oo u dabaal dagayey maalinta haweenka ee 8-da maarso. Foto. Ikraam Hassan
Maanta oo kale sanad walba oo ay bishu tahay 8, waxaa haweenka dunida ku dhaqani ay u dabaal dagaan maalin u qaas ah. Dar-dar gelinta howshani ee dalkaan Sweden, waxaa ay bilaabatay sanadkii 1910-kii, kadib markii shir lugu qabtay magaaladda Kobenhagen ee dalkaasi Denmark loogaaga arrinsaday.
Sanadku markuu ahaa 1912-kii ayaa laga bilaabay dalkaan Sweden u dabaal dega maalintaasi aadka qiimaha u leh ee h8-da maarso. Sanado badan ayey dib u dhac ku yimaadeen weyneynta maalinta 8-da maarso ee dalkan Sweden, balse iftiinkeeda waxaa uu soo bidhaamay 1969-kii, kadib markii dhaq dhaqaayo arday ay ka bilaabmeen dalka Mareykanka.
Sanadku markuu ahaa 1978-dii ayey Qaramadda Midoobey iclaamisay iney 8 maarso tahay maalin caalami ah. Wixii waqtigaa ka dambeeyeyna waxaa ay haweenka dunida u dabaal dagayeen sanad walba maanta oo kale oo ah 8da maarso.
Haweenka Soomaaliyeedna waxaa ay kamid yihiin haweenka dunida ee maalintaasi si gaar ah ugu dabaal dagi jiray. Xukummadihii dalka soomarayna waxaa ay maalintaasi u sameyn jireen munaasbaddo lugu weynayo.